COVID-19 ကိုတိုကျထုတျနရေတဲ့ ကာလအတှငျး ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အိမျခွံမွရေငျးနှီးမွှုပျနှံမှုစြေးကှကျ။ – SoShwe
Home/Home & Property/COVID-19 ကိုတိုကျထုတျနရေတဲ့ ကာလအတှငျး ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အိမျခွံမွရေငျးနှီးမွှုပျနှံမှုစြေးကှကျ။
COVID-19 ကိုတိုကျထုတျနရေတဲ့ ကာလအတှငျး ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အိမျခွံမွရေငျးနှီးမွှုပျနှံမှုစြေးကှကျ။
So Shwe May 23, 2020	Home & Property Leaveacomment
ရနျကုနျမွို့အတှငျးရှိ နိုငျငံတျောစီးပှားရေးဆိုငျရာနဲ့ အိမျခွံမွစြေေးကှကျဆိုငျရာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုစြေးကှကျကို စဉျဆကျမပွတျလလေ့ာနတေဲ့ Colliers International က စီးပှားရေးစြေးကှကျဆိုငျရာ သုတသေနပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ Paul Ryan Cuevas က မွနျမာနိုငျငံအတှငျးမှာရှိတဲ့ ကုနျသညျကွီးမြားနဲ့ စီးပှားရေးပိုငျရှငျတှကေို COVID-19 ကွောငျ့ ရနျကုနျမွို့အတှငျးရှိ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှုနျးအားနဲ့ ပတျသကျပွီး သတငျးကောငျးတဈခုကို မြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ။
Paul Ryan Cuevas ရဲ့အဆိုအရ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ လလေ့ာသုံးသပျရမယျဆိုရငျတော့ နိုငျငံအတှငျး ကုနျပစ်စညျးရောငျးအားနဲ့ ဝယျလိုအားဟာ သိသိသာသာ ကဆြငျးသှားတယျဆိုပမေယျ့လညျး ကံကောငျးစှာနဲ့ပဲ လုပျငနျးကွီးတှဖွေဈတဲ့ အိမျခွံမွရေောငျးဝယျရေးလုပျငနျးတှေ ဆကျလကျလညျပတျနိုငျဖို့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှုနျးက ရာခိုငျနှုနျးအမြားကွီး ကဆြငျးသှားခွငျးမရှိဘူးလို့ သိရပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့အခွစေိုကျ အိမျခွံမွရေောငျးဝယျရေးလုပျငနျးပိုငျရှငျတဈဦးက Myanmar Times သတငျးဌာနမှာ စြေးကှကျမှာ ရောငျးခဖြို့အသငျ့ဖွဈနပွေီဖွဈတဲ့ အိမျခွံမွတှေကေို ဝယျယူလိုသူတှေ အလှနျနညျးပါးနကွေောငျး နဲ့ အိမျခွံမွငှေားယူတဲ့ နှုနျးဟာလညျး ၁၀% သာရှိကွောငျး မြှဝပွေောပွခဲ့ပါတယျ။ COVID-19 ကွောငျ့ အခုလိုမြိုး နိုငျငံရဲ့စီးပှားရေးစြေးကှကျ မတညျငွိမျတဲ့အခွအေနမြေိုးမှာ အိမျခွံမွစြေေးကှကျကို ဝယျယူလိုသူတှေ၊ ငှားယူလိုသူတှနေဲ့ အိမျခွံမွရေောငျးဝယျရေးလုပျငနျးရှငျတှကေ နိုးနိုးကွားကွားရှိနတောကွောငျ့ အိမျခွံမွစြေေးကှကျဆိုငျရာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှုနျးက ကဆြငျးသှားခွငျးမရှိကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ဆကျလကျပွီးတော့ Paul Ryan က “COVID-19 ကပျရောဂါဆိုးကွီးကို အစှမျးကုနျတိုကျထုတျနရေတဲ့ ကာလအတှငျးမှာ စီးပှားရေးလှုပျရှားမှုနှုနျးနဲ့ ကုနျစညျစီးဆငျးမှုနှုနျးဟာ သိသိသာသာ ကဆြငျးသှားပမေယျ့လညျး အိမျခွံမွလေုပျငနျးမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံလိုသူတှနေဲ့ အိမျခွံမွငှေားယူလိုသူတှဟောလညျး ရနျကုနျမွို့အတှငျး အိမျခွံမွစြေေးကှကျကို စိတျဝငျတစားနဲ့ စောငျ့ကွညျ့နပေါသေးတယျ။”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
COVID-19 ကိုတိုက်ထုတ်နေရတဲ့ ကာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးကွက်။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဆိုင်ရာနဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးကွက်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေတဲ့ Colliers International က စီးပွားရေးဈေးကွက်ဆိုင်ရာ သုတေသနပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Paul Ryan Cuevas က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကုန်သည်ကြီးများနဲ့ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်တွေကို COVID-19 ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှုန်းအားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းကောင်းတစ်ခုကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
Paul Ryan Cuevas ရဲ့အဆိုအရ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လေ့လာသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံအတွင်း ကုန်ပစ္စည်းရောင်းအားနဲ့ ဝယ်လိုအားဟာ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ လုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှုန်းက ရာခိုင်နှုန်းအများကြီး ကျဆင်းသွားခြင်းမရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးက Myanmar Times သတင်းဌာနမှာ ဈေးကွက်မှာ ရောင်းချဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်ခြံမြေတွေကို ဝယ်ယူလိုသူတွေ အလွန်နည်းပါးနေကြောင်း နဲ့ အိမ်ခြံမြေငှားယူတဲ့ နှုန်းဟာလည်း ၁၀% သာရှိကြောင်း မျှဝေပြောပြခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကြောင့် အခုလိုမျိုး နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဈေးကွက် မတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို ဝယ်ယူလိုသူတွေ၊ ငှားယူလိုသူတွေနဲ့ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက နိုးနိုးကြားကြားရှိနေတာကြောင့် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှုန်းက ကျဆင်းသွားခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ Paul Ryan က “COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို အစွမ်းကုန်တိုက်ထုတ်နေရတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုနှုန်းနဲ့ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုနှုန်းဟာ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားပေမယ့်လည်း အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူတွေနဲ့ အိမ်ခြံမြေငှားယူလိုသူတွေဟာလည်း ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်နေပါသေးတယ်။”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Source ~ Mingalarrealestate
Previous နှားနို့သောကျခွငျးက COVID-19 ကို ကာကှယျနိုငျသလား ? ? ?
Next အရှသှေ့ားတှေ ပဲ့သှားခဲ့ရတဲ့ အဆိုတျော Jason Derulo